Kunyangwe hazvo dare repamusoro soro reSupreme Court rakati mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance VaTendai Biti nevamwe vavo vashanu vadzokere kudare reparamende. zvinhu hazvisati zvanyatsojeka.
Vamwe vashanu vakadzingwa vanoti VaUkaka Phulu, VaSettlement Chikwinya, VaWillias Madzimure VaRegai Tsunga naAmai Sichelesile Mahlangu vaimbenge vadzingwa mudare reparamende vachinzi vainge vabuda mubato rePDP vachienda kuMDC Alliance vadzokere kudare, hazvina kujeka kuti zvichafamba sei sezvo mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vainge vati nzvimbo dzavanomirira dziitwe sarudzo dzemaby-elections musi wa 26 Kurume.
Nzvimbo dziri kumirirwa nevatanhatu ava dzinoti Harare East, Phumula, Kambuzuma, Mutasa South, Mbizo neNkulumane. Vatanhatu ava vakadzingwa mudare mushure mekunge VaBenjamin Rukanda vaizviti ndivo munyori mukuru wePDP vanyora tsamba kudare vachiti vadzingwe.
Dare repamusoro reHigh Court rakamboti VaBiti nevamwe vavo vadzokere kudare reparamende asi zvakaramba sezvo VaRukanda vainge vaenda kudare repamusoro soro. Dare iri rakati VaRukanda handivo vaive munyori mukuru wePDP sezvo vainge vakwikwidza musarudzo vari kubato reRainbow Coalition.
Mutauriri wedare reparamende VaJacob Mudenda vakarambawo kuti VaBiti nevamwe vavo vadzokere mudare reparamende vachiti vaida kumirira zvinenge zvabva kumatare.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri waVaMnangagwa, VaGeorge Charamba asi hurumende inoti hayo haipindire pane zviri kuitika kumatare.